Mac na-aga n'ihu na-enweta oke ahịa ma e jiri ya tụnyere PC | Esi m mac
Mac na-aga n'ihu na-enweta oke ahịa ma e jiri ya tụnyere PC
Ahịa ahịa PC dị na doldrums na dịka data enwetara site na ndụmọdụ IDC, ugbu a, enwere 11,5% belata ahịa ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga n'ihe metụtara mbupu ụwa nke PC na nkeji iri na ise nke afọ 2016. Otú ọ dị Apple enwetawo òkè ahịa, e mere atụmatụ na ngụkọta mbupu PC bụ 60,6 nde n'oge nke mbụ nke afọ a.
Mbupu PC n'otu n'ime nnukwu ahịa, United States, dara 5,8% na-ahapụ nkeji 13,6 na nkeji nke mbụ a. Nsogbu ndị a na ọnụ ọgụgụ nke nkeji ebupụtara nwere ike ịbụ n'ihi nchegbu ka ukwuu banyere ọnọdụ akụ na ụba ụwa, na ụfọdụ akụrụngwa a na-ere anaghị agụnye mmelite na-akwụghị ụgwọ na Windows 10 ma ọ bụ ozugbo ndị ọrụ rịọrọ akụrụngwa mgbakọ ha na-enweghị iji nke ọma -mara mara.
Dabere na onye nyocha nyocha IDC Linn Huang:
Ọchịchọ maka PC na US ka dị nwayọ nwayọ, mana n'aka nke ọzọ anyị nọ n'oge mgbanwe. N'ime afọ ahụ enwere ọnụ ọgụgụ ahịa kachasị elu maka nzụta ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ yana ngalaba agụmakwụkwọ nke a na-enyekarị na nkeji nke abụọ. Enwere ụfọdụ ndị na-azụ ahịa ka na-atụle mgbanwe ma ọ bụ Mbugharị na Windows 10 na mgbakwunye na ịrị elu nke ChromeBooks na agụmakwụkwọ mbụ na nke abụọ, yabụ na anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ.
Banyere data zuru ụwa ọnụ anakọtara, anyị nwere ike ịhụ etu Dell si nweta mmụba nke 4,2% yana oke ahịa ụwa zuru oke nke 14,9% karịa ASUS na ụlọ ọrụ ndị ọzọ amaara ama, agbanyeghị HP adabala n'ahịa ọ bụ ezie na ọ na-ejigide ebe nke abụọ na-esote Lenovo. Maka akụkụ ya, Apple na-arịgo Ebe nke anọ na tebụl nwere òkè 4% Yiri nnọọ ka nke ASUS n'ụwa niile, ọ bụ ezie na ịrị elu a bụ ọkachasị ekele maka irere akụrụngwa ya na North America, anyị ga-ahụ ma enwere ike idobe ya ma ọ bụ melite ya n'afọ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Mac na-aga n'ihu na-enweta oke ahịa ma e jiri ya tụnyere PC
Album Drake na-abịanụ 'Echiche Site na 6' naanị na Apple Music
Zipu nchọpụta nke Apple TV 4 gị site na iji ụzọ dị mfe iji Siri Remote